भूमिही’न र सु’कुम्बासीलाई जग्गाको पुर्जा दिने प्रक्रिया सुरु गर्यो ओली सरकारले ! – Onlines Time
January 24, 2021 January 24, 2021 onlinestimeLeaveaComment on भूमिही’न र सु’कुम्बासीलाई जग्गाको पुर्जा दिने प्रक्रिया सुरु गर्यो ओली सरकारले !
सरकारले १८४ जनालाई जग्गाधनी लालपुर्जा वितरण गर्ने निर्णय गरेको छ । बुटवल उपमहानगरपालिकाका वडा नं ६, ७ र ८ का बहलवाला विटौली, कोदालेले मात्र जग्गाधनी लालपुर्जा पाएका छन् भने बाँकी अन्यले पछि लालपुर्जा पाउने छन्
को-रोना बि’रामी संग बस्ने नर्सलाई यति धेरै पि’डा | हस्पिटल भित्र यस्तो सम्म हुन्छ । Anita Thapa,भिडियो हेर्नुहोस (सम्मान स्वरुप सेयर गराै)